रेखा राप्रपामा जुहारी ट्विटरमा - साप्ताहिक
रेखाजी राप्रपामा जाने रे । यो समाचार सुनेर म त खुसी भएँ । हामी कलाकारमा एउटै फिल्ममा झुन्डिएर बस्ने बानी हुँदैन । जम्मा ३० दिनको एग्रिमेन्ट हुन्छ । त्यो एग्रिमेन्ट खत्तम, अर्को फिल्मको सुटिङ सुरु । कुरो क्लियर छ । फिल्म चेन्ज, हिरो चेन्ज । फिल्म माओवादीको ठाउँमा फिल्म राप्रपा । हिरो प्रचण्डको ठाउँमा हिरो कमल थापा । दलहरूले विचार गर्नुपर्छ, टीका लगाउनेहरूलाई आफ्नो नसम्झ । टिक्नेहरूलाई आफ्नो सम्झ । हामी त कलाकार, जतातिर लाइटिङ, उतैतिर फाइटिङ ।
यता सकिनन् उता रमाइन् त के भो, पुष्प छोडेर कमल समाइन् त के भो, राजनीतिको बजारमा रेखा थापाले केही गुमाइन्, केही कमाइन् त के भो ।
देशमा कलाकार पनि धेरै भए अब, पार्टी फेर्दै हिंड्ने रेखा थापा होइन, देशलाई नै फेर्न खोज्ने धुर्मुस–सुन्तलीलाई रोजौं ।
अब राप्रपा मुलुकको नम्बर एक पार्टी हुने भो । किनभने थापा माओवादी प्रवेश गर्दा माओवादीसमेत नम्बर एक नै थियो ।
रेखा थापाले राप्रपा प्रवेश गरेलगत्तै त्यो पार्टीका अध्यक्षदेखि सबै नेताले हर्ष बढाइँ गरेको देख्दा लाग्यो— नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसँग खायो ।
नायिका रेखा थापालाई देखा थापा भन्थे सबैले, हो रै’छ । आखिर देखाइछाडिन् कमरेड प्रचण्डलाई राप्रपामा छिरेर ।
रेखा थापा राप्रपा प्रवेश गरेको कुरालाई अतिरञ्जित गरिएको देख्दा नि अचम्म लाग्छ, आखिर उनी पनि त एक स्वतन्त्र नागरिक हुन् ।
समाजका हरेक क्षेत्रमा राप्रपा । गायिका कोमल वलीपछि चर्चित नायिका रेखा थापा राप्रपामा प्रवेश । सबै मिलेर बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गरौं ।
रेखा थापाको घर राप्रपा हो रे– हैट !
कोमल वली, रेखा थापाहरू राप्रपामा गएपछि अरू पार्टीमा के बसिरहनु होला हौ ।
अर्को चुनावसम्म पर्खनुस् । त्यो बेला पनि राप्रपा अझ सबल भएछ भने सोच्नुस् । राप्रपा खस्किएछ भने रेखा थापा आफैंले जाने नयाँ ठाउँ देखाउनेछिन् ।
रेखा थापा माओवादी प्रवेश गर्दा क्रान्तिकारी केटी थिइन्, राप्रपा प्रवेश गर्दा हिन्दू केटी भइन्, अर्को वर्ष कुन केटी हुने हुन् कुन्नि ?
आउँदो चुनावमा दर्‍हो प्रतिस्पर्धा होलाजस्तो छ रेखा थापा र करिश्मा मानन्धरको । नयाँ शक्ति भर्सेस राप्रपा । एउटै क्षेत्रबाट उठाउनुपर्छ ।
रेखा थापालाई राप्रपा चाहिएको हो कि राप्रपालाई रेखा थापा, कुरा बुझ्न सकिएन ।
रेखा थापाले फिल्म हल फेरिछन्, मान्छे नआउने माओवादी हलमा कति दिन चलिरहनु ? राप्रपा हलमा उनको फिल्म कति चल्ने हो ?
करिश्मा मानन्धर— नयाँ शक्ति, सुष्मा कार्की— एमाले, रेखा थापा— राप्रपा, ज्योति मगर— माओवादी, वर्षा राउत— कांग्रेस । लु भन्नुस्, सबैभन्दा हट पार्टी कुन रै’छ नेपालको ?
रेखा थापा गाई दुहुनतिर लागिन् । अब गाईले लात्ताले हान्यो भने फेरि कता जाने हुन् ?
लेखेर राख्नोस्, अब राप्रपा नेपाल सर्खाराँ जाँदा रेखा थापा कन्फर्म मन्त्री हुन् ।
हिन्दूवादी भएर राप्रपा प्रवेश गरेकी हुँ भन्ने रेखा थापामा अलिअलि भए पनि म्याचुरिटी आएको देखियो । उनी नाच्न मात्र राप्रपामा गएकी होइनन् ।
रेखा थापाले के गरून त, एमालेमा जान जाँच दिनुपर्छ बरु राप्रपाले फूलमालाले स्वागत त गर्‍यो ।
रेखा आन्टीलाई भित्र्याउन पाएर कमल हजुरबा मख्ख छन् । अब ठूलै क्रान्ति गर्छ राप्रपाले हेर्दै जाम हामी ।
रेखा हो कि राप्रपा, चिन्नै गार्‍हो भो’रे ।
प्रचण्डसँग डानस, राउटेलाई चुम्मा अनि थापाकाजीसँग साँठगाँठ । प्रभुको लीला अपरम्पार छ ।
रेखा थापा राप्रपा प्रवेश गरेपछि के अब गाईले बाच्छो पाउँछ त ? राजनीति विचार र सिद्धान्तमा हुन्छ, स्वार्थमा होइन ।
माओवादीले चुनाव नजित्ने निश्चित भएर हो कि क्या हो रेखा दी राप्रपामा छिर्नुभा’को ।
रेखा थापा राप्रपामा गइन् रे । कुन चुनावमा फेरि राप्रपाले टिकट दिंदैन र मधेसी मोर्चातिर जान्छिन् ।
विकास बजेट पाँच महिनामा ७ प्रतिशत खर्च हुन्छ । यसमा कोही बोल्दैन । हल्ला गर्छन् रेखा थापा राप्रपामा गइन् भनेर ।
राप्रपाको आमसभा त हेर्न जानैपर्ला जस्तो छ कतै रेखा थापाले आइटम डान्स पो गरिहाल्छिन् कि ?
प्रचण्डले नचाउन नसकेपछि राप्रपा प्रवेश गर्न बाध्य हुनु भा’रे भन्ने हल्ला रैछ नि बजाराँ ।
राप्रपाले तामझामसहित रेखालाई भित्र्यायो । अब भोटिङ लिस्टमा नाम दर्ता गराओस् । नत्र पछि उम्मेदवार बनाउन लाग्दा भोटिङ लिस्टमा नाम नहोला ।
रेखा थापा, कमल थापा । थापा–थापा मिलेर खाउँm पापा— राप्रपा नेपालको नयाँ स्लोगन ।
प्रचण्डको न्वारानको नाम छवि भन्ने थाहा पाएपछि आफूलाई छवि नाम गरेका व्यक्ति नफाप्ने भएकाले प्रचण्डलाई छोडेकी हुन् रे रेखा थापाले ।
दल वा पार्टीको झन्डा बोक्ने रेखा थापाजस्ता कलाकार होइन, राष्ट्रको झन्डा बोक्ने धुर्मुस–सुन्तलीजस्ता कलाकारको खाँचो छ यो देशलाई ।
जसको जे काम हो उसले त्यही गर्नुपर्छ । कलाकारले कलाकारिता नै गर्नुपर्छ, नेताले राजनीति । दशतिर हात हालेर असफल हुनुभन्दा एउटै काममा सफल हुनु राम्रो ।
छवि र रेखाको सम्बन्ध टिकाउ हुँदैन, यो प्रमाणित भैसकेको छ । त्यसैले कृपया यी नाम भएकाहरू एक–अर्कादेखि टाढै बसुम है ।
रेखा थापाले आफ्नो जीवनमा दुईवटा छविलाई धोका दिइन् ।
रेखा थापालाई राप्रपामा लगेर कमल थापाले फिलिम बनाउन आँटे कि क्या हो ?
रेखा थापाको राप्रपा प्रवेशपछि अब प्रचण्डको नाच्ने दिन गए भनेर न्यूज हेडलाइन नआउला भन्न सकिन्न । पुष्प छाडे पनि कमल छाडेकी छैनन् ।
प्रचण्डले नाच्न जानेनन् क्यारे, कमल थापाको नाच हेर्न पाइने भइयो ।
रेखा थापा राप्रपा प्रवेश गरेकै कारण उनको फिलिम हेर्ने एक जना दर्शक पनि राप्रपामा जाँदैनन् । फाइदा चैं कसलाई हुने हो कुन्नि ?
पहिले प्रचण्डसँग छम्मा–छम्मा गरेर चर्चा बटुलेकी रेखाले अब कमल थापासँग छम्मा–छम्मा गरेर ह्याट्रिक गर्लिन जस्तो छ ।
दुई कुमारी (रेखा थापा र कोमल वली) भएपछि राप्रपा हिरोनीहरूको पार्टी हुने भयो, हिरोनीलाई हिरो खोज्ने जिम्माचाहिं कमल थापाको ।
आजको यक्ष प्रश्न— रेखा थापा राप्रपा छिरेपछि कमरेड प्रचण्डको क्रान्ति के होला ?
तरकारी बेच्नेले फिलिम खेल्न थाले, फिलिम खेल्नेले राजनीति गर्न थाले, राजनीति गर्नेले कमेडी गर्न थाले, कमेडी गर्नेले देश बनाउन थाले ।
राप्रपाले चुनावमा बहुमत ल्याओस्–नल्याओस, रेखा थापा ल्याएछ । यत्तिमै चित्त बुझाउँm अहिलेलाई ।
भुवन केसी, करिश्मा मानन्धर, कोमल वली र रेखा थापाहरू बहुदलीय व्यवस्थाका वास्तविक हिमायती हुन् ।
यही महिना दुई कलाकार कोमल वली र रेखा थापा भित्र्यायो राप्रपाले । खासमा मंसिर त राप्रपालाई पो लागेछ ।
राप्रपा अब पुराना पञ्चहरूको पार्टी मात्र रहेन । गणतन्त्रवादी नेतृ रेखा थापा प्रवेश जो गरेकी छिन् ।
रेखा थापा राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेपछि कमरेड प्रचण्डसँग कुम हल्लाई–हल्लाई नाच्ने डान्सरको तु. आवश्यकता परेको हुँदा योग्य व्यक्तिले सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
सबै थापाहरू मात्र, भएन भनेर रेखा थापा पनि । होइन यो राप्रपा हो कि थाप्रपा हो ? बुझ्न गाह्रो भो— सुमन भाइ ।
राप्रपाको एकता, राजाको सक्रियता र रेखा थापाको राप्रपा प्रवेशबाट ठूलै खेलको संकेत पाइन्छ है ।